Musharax C/raxmaan C/shakuur: "Wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland waa ka weyn yihiin in Olole doorasho loo isticmaalo" Isniin, July 02, 2012 (HOL) — C/raxmaan C/shakuur Warsame oo ka mid ah xubnaha u tagaan xilka madaxnimo ee Soomaaliya oo shalay ka qaybgalayay xaflad loo qabtay xuska 1-da Luuliyo ayaa sheegay in wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland ay ka weyn yihiin olole loo isticmaalo doorasho.
Musharaxa ayaa ku dheeraaday taariikhda Somalia iyo sidii ciidanka Soomaaliyeed uu u ahaa mid sharaf, hufaan iyo karti leh oo ka madaxbannaan siyaasadda. Isagoo madaxda DKMG ah ku eedeeyay inay u isticmaalaan awoodda dalka qaab maroorsi ah, sidoo kalena ay iyagu isku koobeen warbaahinta qaranka, taasoo uu sheegay in aanay ogoleyn inuu ka baxo fikir aan kooda ahayn, isagoo sheegay in warbaahinta Qaranka lagu dhisay canshuurta shacabka Soomaaliyeed ayna waajib tahay in loo sinnaado isticmaalkeeda.
Isniin, July 02, 2012 (HOL) — Magaalada Toronto ee dalka Kanada ayaa waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu taageerayay murashaxnimada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, C/weli Maxamed Cali Gaas isla markaana lagu taageerayay waxqabadka xukuumaddiisa muddadii halka sano ahayd ee ay shaqeynaysay. Dagaal khasaare geystay oo Ciidamada DKMG, kuwa Itoobiya iyo Xoogaga Al-shabaab ku dhexmaray duleedka Degmada Xudur 7/2/2012 4:37 AM EST